Southwest Airlines waxay mamnuucday xayawaanka taageerada shucuurta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Southwest Airlines waxay mamnuucday xayawaanka taageerada shucuurta
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • News • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Laga bilaabo Maarso 1, 2021, Southwest Airlines waxay aqbali doontaa oo keliya eeyo u tababaran safarka mana sii qaadi doonto xayawaanka taageerada shucuurta
Shirkadda Southwest Airlines ayaa maanta ku dhawaaqday in, iyada oo la waafajinayo xeerar cusub oo ka soo baxay Waaxda Gaadiidka Mareykanka (DOT), shirkadda side ay isbedel ku sameyneyso siyaasaddeeda ku saabsan xoolaha la tababaray iyo xayawaanka taageerada shucuurta ah. Laga bilaabo Maarso 1, 2021, shirkaddu waxay aqbali doontaa oo keliya eeyo u tababaran safarka mana sii qaadi doonto xayawaanka taageerada shucuurta leh.
Dib-u-eegidgan, Southwest Airlines waxay u oggolaan doontaa oo keliya eeyaha adeegga ee shaqsiyan loo tababaray inay shaqeeyaan ama qabtaan howlo loogu daneynayo shaqsi aqoon leh oo naafo ah inay la safraan Macaamiisha. Noocyada naafanimada waxaa ka mid ah jir ahaan, dareen ahaan, maskax ahaan, caqli ahaan, ama naafonimo kale oo maskaxeed oo kaliya eeyaha ayaa la aqbali doonaa (oo ay ku jiraan kuwa loogu talagalay adeegga maskaxda) - noocyo kale looma aqbali doono inay yihiin xayawaan adeeg u tababaran.
“Waan ku bogaadinaynaa Waaxda GaadiidkaXukunka ugu dambeeyay ee noo ogolaanaya inaan sameyno isbadaladan muhiimka ah si aan wax uga qabano tabashooyin fara badan oo ay soo jeediyeen shacabka iyo shaqaalaha shirkadaha duulimaadyada ee la xiriira daabulka xoolaha aan tababbarka laheyn ee ku jira qolalka diyaaradaha, ”ayuu yiri Steve Goldberg, Madaxweyne Ku Xigeenka Sare, Howlaha iyo Marti gelinta. “Southwest Airlines waxay sii waddaa inay taageerto awooda shaqsiyaadka aqoonta leh ee naafada ah inay u keenaan eeyo adeeg u tababaran safarka waxayna wali ku dadaalaysaa inay siiso khibrad safar oo macquul ah oo la heli karo dhamaan Macaamiisheena naafada ah.”
Iyada oo qayb ka ah isbeddelkan, Macaamiisha la safraya eeyaha adeegga ee tababbaran hadda waa inay soo bandhigaan dhammaystir, oo sax ah, Foomka Gaadiidka Cirka ee Adeegga Xayawaanka ee irridda ama tigidhka maalinta safarkooda si loo xaqiijiyo caafimaadka xayawaanka adeegga, dhaqanka, iyo tababarka. Macaamiisha waa inay buuxiyaan foomka, kaasoo laga heli karo bogga internetka ee shirkadda diyaaradaha iyo goobaha garoonka diyaaradaha, ka dib marka ay safraan safarkooda.
Intaa waxaa sii dheer, Koonfur Galbeed mar dambe ma aqbali doonto xayawaannada taageera shucuurta ee safarka laga bilaabo Maarso 1, 2021. Macaamiisha ayaa laga yaabaa inay weli la safraan xayawaannada qaar iyada oo qayb ka ah barnaamijka xayawaanka hadda jira ee shirkadda duulimaadka laga qaado; si kastaba ha noqotee, xayawaanku waa inay buuxiyaan dhammaan shuruudaha lagu dabaqi karo ee ku saabsan qolalka gudaha iyo noocyada (eeyaha iyo bisadaha kaliya).
Macaamiisha haysta Boos celinta hadda jira ee safarka xoolaha aan la aqbalin wixii ka dambeeya Febraayo 28, 2021 waxay la xiriiri karaan Koonfur-galbeed wixii macluumaad dheeraad ah iyo gargaar.